Kunze mbanje kurima | MyWeedSeeds.com
Mbanje dzekunze kukura
Kazhinji mbanje yekunze kuraira
Chinhu chekutanga chinodiwa nevarimi vembanje mbanje inzvimbo yakanaka yekurima mbesa mukati. Iyi nzvimbo inofanira kunge iri kumwe uko vanhu nemhuka zvingangokanganisa goho. Iwe hauchade kurima mbanje mbichana padhuze nenjanji njanji, nzira, tambo yemagetsi, mugwagwa kana chero chimwe chinhu chakagadzirwa nevanhu ...
Kurima mbanje mubindu rako kana greenhouse
Kana iwe uchifanira kusarudza pakati pekurima mbanje mukati kana kunze, iwe unofanirwa kugara uchisarudza kunze. Chiedza chezuva chairo chinoita kuti mhedzisiro igume yakasimba uye kune matambudziko mashoma kwazvo aunofanirwa kukwikwidzana nawo. Iko hakuna kunetseka pamusoro pechiedza chiri kudonhedza mukati kana nguva apo imba yako yekukura inofanira kugara ...
Nzira yekurima mbanje panze
Kana iwe uri kuronga kurima mbanje, saka chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita kuwana mhando-yemhando yembanje mbichana. Izvi zvinova zvinotyisa kana usingawanzo kukomberedza mbanje miriwo aficionados. Iwo mutemo wenguva dzose wechigunwe unobva wave iwo wakakwira iwe kubva pane chaunopa, zvirinani mbeu iri kukura ...